Archive du 20180326
Didier Ratsiraka “Tsy nangalatra izany aho”
Nandrasan’ny rehetra ny fanambarana nataon’ny Amiraly Didier Ratsiraka nandritra ny fanamarihana ny faha-42 taona niorenan’ny Antoko Arema teny amin’ny Kianjan’ny Kanto Mahamasina ny sabotsy 24 martsa lasa teo.
Hery Vaovao ho an’i Madagasikara Ialokalofan’ireo antoko politika reraka
Miha miharihary ankehitriny fa efa nahantra ary miha mahantra olona ny antoko naorin’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina tamin’ny taona 2013 na ny Hery vaovao ho an’i Madagasikara.
Antanimena Nisy nitoraka grenady ny foiben’ny HVM
Nisy nanipy zavatra mipoaka teny amin’ny foiben-toeran’ny antoko Hery Vaovaon’i Madagasikara (HVM) teny Antanimena ny sabotsy 24 martsa lasa teo manodidina ny tamin’ny 9 ora sy sasany alina. Raha araka ny fantatra dia lehilahy 2 no tazan’ny teny amin’ny manodidina nanipy zavatra ary nitsoaka avy eo.
Fanomanana ny fifidianana Ho avy amin’ny 3 aprily ny SADC
Ho avy eto amintsika indray ny iraka manokan’ny SADC (Southern African Development Community) ny 3 aprily ho avy izao, raha araka ny tsiliantsofina re.
Vondrona iraisam-pirenena Miandry marimaritra iraisana
Miandry marimaritra iraisana ny sehatra iraisam-pirenena amin’ny fanatanterahana ny fifidianana eto amintsika. Isan’izany ny momba ny lalàm-pifidianana, izay mety hitondra olana sy krizy vaovao eto amin’ny firenena, raha toa ka handeha ila tsy hisy fandraisana ny tolo-kevitr’ireo ankolafin-kery hafa soloin’ny depiote maro tena, izay efa nijoro ny hanohitra ny fisian’ny kajikajy politika ao anatiny.
Fanenjehana momba ny hetra Atao fitaovana politika hamotehana an-dRavalomanana
Tsy mbola misy datim-pifidianana sy propagandy dia efa miainga ny paikady fanilihana izay kandidà atahorana. Amin`izay dia atao sesilany mihitsy ny fifanenjehana.
Orlando Robimanana Tsy mbola nanambara ofisialy na kandida na tsia
Hatry ny ela no nandrenesana ny mety hirotsahan’i Orlando Robimanana ho kandida filoham-pirenena.
Taratasin’i Jean Ho hita anie ny gisa mainty
Arahabaina ianao ry Jean mbola velon’aina ao anatin’izao herinandro masina izao.
Miarinarivo - Itasy 105 mianadahy nanaiky ho masoivohon’ny CNaPS
Fampiofanana fiahiana ara-tsosialy ataon’ny Tahirim-pirenena na ny CNaPS nandritra ny telo andro no natao tany Miarinarivo renivohitry ny Faritra Itasy.
Ora iray ho an’ny tany Nafana ny fanentanana amin’ny fampiasana fatapera mitsitsy
Notanterahina ny sabotsy teo ny fanamarihana ilay ora iray ho an’ny tany andiany fahavalo nokarakarain’ny WWF. Diabe nanodidina ny ranon’Anosy no nisantarana izany, hetsika nanomboka nankalazaina teto amintsika ny taona 2007.
Fikambanana mampiely baiboly « Mila fehezin’ny fiangonana ny teknolojia.»
Niha mora vidy sy niha mora azo hatrany ny baiboly tao anatin’izay taonjato maro nisiany izay, hoy ny tale jeneralin’ny fikambanana mampiely baiboly malagasy,
FJKM Ankazonorina Ambohibato Tafapetraka ny mpitandrina vaovao
Tafapetraka omaly alahadin’ny sampan-drofia sady alahadin’ny Slk ao amin’ny fiangonana ny mpitandrina vaovao notendren’ny Synodam-paritany hitondra ny fiangonana FJKM Ankazonorina Ambohibato, Andriamitify Eli-Seth, ka ny mpitandrina mpihevi-draharaha ao amin’ny SPAA 12,
TOP 6 de l’Océan Indien Nomontsanin’ny Cosfa Malagasy 67-7 ny Mahorais
Nomontsanin’ny mpilalao rugby Malagasin’ny Cosfa 67-7 omaly alahady 25 martsa tetsy amin’ny kianjan’i Mahamasina ny ekipan’i Mayotte rugby. Hita ho navesatra dia navesatra ireo mpilalao vahiny ka tsy nahatohitra ny hazakazaka nataon’ny mpilalao Malagasin’ny Cosfa.
Lomano – Tompondakan’i Afrika Medaly 12 no voan-dalana nentin’ny Malagasy nody
Medaly 12 be izao ka ny 2 volamena, ny 5 volafotsy ary 5 hafa alimo no voan-dalana nentin’ny mpilomano Malagasy nandray anjara tamn’ny fifaninanana fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika faritra faha-4 notontosaina tany Malawi ny 21-24 martsa 2018.
Baolina kitra fanomanana ny CAN 2019 Lavon’i Kosovo 1-0 ny Barean’i Madagasikara
Tsipy kanetibe « Grand Open des arbitres » Lasan’i Taratra sy Rija ny 2.000.000 ariary
Lasan’i Taratra sy Rija ny amboara kalisy sy ny lelavola 2.000.000 ariary teo amin’ny fifaninanana tsipy kanetibe « Grand Open des arbitres » notontosaina ny sabotsy 24 sy omaly alahady 25 martsa tetsy amin’ny boulodrôme Cbt tetsy Mahamasina.
Tsy milamina intsony !
Tsy milamina ny tany sy ny firenena ! Mihamafy ny savoritaka sy ny lonilony politika, ary mitana ny sain’ny maro indray izao ny fisian’ny fipoahana baomba teny amin’ny foiben’ny antokon’ny fitondrana. Iza no ao ambadika ary inona no tanjona ?
Ady amin’ny fahantrana Olona an-jatony no nomen’ny Openflex fiofanana maimaimpoana
Olona an-jatony no indray nomen’ny Ong Stileex ahitana ny Openflex fiofanana maimaimpoana ny sabotsy teo, teny amin’ny Forello Expo Tanjombato nandritra ilay “Salon Asia Enjoy Madagascar”
Faran’ny herinandro Nanjakan`ny mozika rock
Hetsika in-droa miantoana tao anatin’ny faran’ny herinandro no natolotry ny tarika Ambondrona tetsy Antsahamanitra ny sabotsy sy alahady lasa teo.
Carles Puigdemont Voasambotra tany Alemaina
Nosamborin’ny polisy Alemana omaly maraina teny amin’ny lalambe mikodana any Schleswig-Holstein i Carles Puigdemont, ilay filohan’ny faritr’i Catalan –Espagne izay efa nesorina tamin’ny toerany moa.
Mpivarotra etsy amin’ny Fasan’ny Karana Nitokona indray, tsy hanaiky fa ho eny Ambohimanambola
Rehefa tsy nisy nahazo alalana hivarotra eny amin’ny tobim-piantsonana vaovao eny Andohatapenaka ireo mpivarotra etsy amin’ny Fasan’ny Karana dia nanambara indray izy ireo ny faran’ny herinandro teo fa tsy maintsy hanaraka ireo mpitatitra mihazo ny lalam-pirenena fahafito hifindra eny Ambohimanambola.